မေမေတို့ရဲ့ ကလေးကို ဘယ်တော့မှ မလုပ်သင့်သောအရာ (၄) ခု
Home Child Care မေမေတို့ရဲ့ ကလေးကို ဘယ်တော့မှ မလုပ်သင့်သောအရာ (၄) ခု
အမှန်တကယ်တော့ လူတစ်ယောက်ဟာ မိခင်ကောင်းတစ်ဦးဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးလို့ မသိသေးသရွေ့ ကလေးမမွေးဖွားသင့်ပါ။ ဒါဟာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စစ်မှန်တဲ့ လွှမ်းမိုးမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မေမေတို့ရဲ့ ကလေးတွေကို အမှားလုပ်နိုင်ခြေဖြစ်တဲ့ အခြေအနေတွေကို ကြိုတင်ရှောင်ကြဉ်နိုင်ဖို့ မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
၁။ သင့်ကလေးကို သင့်လက်ထဲမှာ မဖျက်ဆီးပါနဲ့
တကယ်တော့ သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ကလေးရဲ့ အကောင်းဆုံးခိုလှုံရာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကိုးလတာကာလအတွင်းဟာ သင့်ရဲ့ ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာ နွေးထွေးမှုနှင့် လုံခြုံမှုကို ကုန်လွန်စေခဲ့ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ လက်မောင်းတွေဟာ အပြင်ဘက်ကမ္ဘာထဲက ခံစားချက်တွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်မယ့် အကောင်းဆုံးအကာကွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးဟာ အနည်းဆုံး ၁၈ လ မပြည့်မချင်း မေမေတို့ရဲ့ ကလေးကို ချစ်ခင်တွယ်တာမှုတွေအကောင်းဆုံးပေးဖို့ အရေးကြီးဆုံးပါ။ မိခင်နှင့်ကလေးအကြား နှောင်ကြိုးတွေခိုင်မာစေဖို့ အရေပြားချင်းထိတွေ့ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၂။ ကလေးကို ဘယ်တော့မှ လျစ်လျူမရှုပါနဲ့
စကားကောင်းကောင်းမပြောနိုင်သေးတဲ့ကလေးတွေဟာ ငိုခြင်းကသာ သူတို့ရဲ့ အဓိကဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ငိုကြွေးခြင်းကို လျစ်လျူရှုခြင်းခံရတဲ့ ကလေးတွေဟာ စိတ်ပူပန်ခြင်းတွေကို ခံစားကြရပါတယ်။ အကာကွယ်မဲ့တဲ့ လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းနှင့် သူ့မိဘတွေအပေါ် ကာကွယ်တတ်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အလေးပေးနိုင်တဲ့ အနေအထားမို့ ဒီကိစ္စကို ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
၃။ သူ့ကို တစ်ယောက်တည်း ဘယ်တော့မှ မချန်ထားခဲ့ပါနဲ့
မေမေတို့ကလေးကို ဘယ်တော့မှ မလုပ်သင့်တဲ့ နောက်တစ်ခုက ဒီအချက်ပါပဲ။ တော်တော်များများကတော့ ဒီလိုလုပ်တာဟာ ကလေးငယ်တွေကို အမှီအခိုကင်းဖို့ သင်ကြားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာ ကလေးဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကင်းမဲ့နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ လုံခြုံမှုကင်းမဲ့ခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ကိုယ်လေးစားမှုနိမ့်ကျခြင်းတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
၄။ ကလေးကို ဘယ်တော့မှ မရိုက်ပါနဲ့
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအမှားက ကလေးငယ်တွေကို အမှီအခိုကင်းတတ်စေဖို့ ရိုက်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ကို လက်ခံတာပါပဲ။ အကြမ်းဖက်မှုဟာ ဖြေရှင်းနည်းမဟုတ်သလို သင်ကြားခြင်းနှင့် စည်းကမ်းလိုက်နာခြင်းအတွက် လက်စွဲကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ကလေးတွေကိုမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အရွယ်ရောက်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်မတို့ဟာ ကလေးကို မေတ္တာပြတတ်ဖို့ လမ်းပြခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်ပေးဖို့ သင့်မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ သူတို့ကို ရိုးရှင်းတဲ့အသံတွေနဲ့ ပြောရုံနဲ့ နားလည်နိုင်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုဟာ ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို နာခံဖို့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleကလေးနဲ့ အိမ်အလည်သွားတဲ့အခါ စိတ်ဖိစီးမှုမဖြစ်အောင် ရှောင်ရှားနည်း
Next articleသတိနဲ့ယှဉ်တဲ့ မိဘအုပ်ထိန်းမှု ဆိုတာဘာလဲ? ဘယ်လိုကျင့်သုံးမလဲ?
သားသားမီးမီးတို့အတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်စေမယ့် သောက်သုံးစရာများ
ကလေးက တစ်ယောက်တည်း ကစားရတာကို နှစ်သက်လို့ မေမေတို့ စိုးရိမ်သင့်သလား?
Mom and Baby169
Hein Myat - October 20, 2020 0